A ga-ewepụta iQOO Neo 5 na Machị na Snapdragon 870 | Gam akporosis
A ga-ewepụta iQOO Neo 5 na Machị na Snapdragon 870
N’oge na-adịghị anya, anyị ga-anabata ọhụụ ọhụụ dị elu, na nke a ga-elekwasị anya na ngalaba egwuregwu. Ọ bụ ya iQOO Neo 5 Vivo mobile nke anyị anaghị ezo aka, n'ihi na anyị maara mgbe a ga-ebupụta ya.
Machị bu onwa a gha ewepu ulo onodu a di elu, dika akuko ohuru edeputara nke gosiputara ya. Nke a akọwaghị kpọmkwem ụbọchị a ga-ewepụta ọnụ ya, mana a na-atụ anya ịmalite ya n'etiti ọnwa ahụ, yabụ na anyị ga-abụ otu ọnwa ma ọ bụ obere karịa site na ịmara ya.
IQOO Neo 5 ga - abụ igwe eji egwu egwu, ma nwekwaa “ọnụ ala”
Así es. A naghị atụ anya na iQOO Neo 5 ga-abụ ekwentị dị oke ọnụ dị oke ọnụ. Cheta na iQOO bu sub-brand nke Vivo; nke a apụtawo n'oge gara aga na ọtụtụ ụdị arụmọrụ dị elu maka ịnyeghị ha ọnụ ahịa karịa euro 600-700. Ọzọkwa, ọ bụrụ na anyị eburu n'uche na ọ bụ Snapdragon 870 ma ọ bụghị ya Snapdragon 888 onye ga-ebi n'okpuru mkpuchi ekwentị, ihe mgbochi ahụ enweghị ike ịgafe euro 600 nke ụgwọ mmalite na nke a, ọ bụ ezie na a ga-ahụ nke a.
Na Machị anyị ga-ama ihe niile gbasara ama ama a, ọ bụ ezie na enwererịrị ọnụọgụ ọtụtụ na-egosi ụfọdụ njirimara nwere ike ịkọwapụta na nkọwapụta ya.
The iQOO Neo 5 ga-abịa na Super AMOLED ihuenyo na a 120 Hz tuondu ume na 16 MP mkpebi n'ihu igwefoto.
Sistemụ igwefoto azụ nke ekwentị ga-agba okpukpu atọ ma onye isi 48 MP na-eduzi ya, oghere nke 13 MP nke ga-arụ ọrụ dị ka obosara sara mbara na onye ikpeazụ 2 MP (ikekwe nnukwu) shooter. A na-ekwukwa na batrị ahụ ga-abụ 4.400 mAh na ọ ga-abịa na nkwado maka ịkwanye ngwa ngwa nke 88 W site na eriri na 66 W site na ikuku.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » A ga-ewepụta iQOO Neo 5 na Machị na Snapdragon 870
Kpoo Amazon Music HD n'efu maka ọnwa 3
Infectonator 3: Apọkalips na-ada ọzọ iji taa ahụhụ ụmụ mmadụ na zombies